healthy life style – Page 11 – Healthy Life Journal
အူမကြီးကိုသန့်စင်စေမည့် အန္တရာယ်ကင်းသော နည်း ၇ သွယ်
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အူမကြီးက ငါးပေအရှည်ရှိပြီး လူ့ဘဝရဲ့တစ်နေ့တာဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးသန့်စင်ပြီး ကျန်းမာစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ သွယ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အစားအသောက်ထဲ ဗီတာမင်စီထည့်ပါ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာပါတဲ့...
——၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– စိတ်ကျရောဂါနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲရောဂါက ယောကျာ်းတွေမှာ မိန်းမတွေထက် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း နည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေနှုန်းက ယောကျာ်းတွေထဲမှာ မိ်န်းမတွေထက် ၃ ဆမှ ၄ ဆအထိ ပိုမိုများပြားတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။...
အမျိုးသားတို့ အဖြစ်များသည့် ခြေထောက်အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း
ခြေထောက်အနံ့ဆိုးထွက်တာက အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားနဲ့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ခံစားချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ရှူးဖိနပ်တစ်ရံတည်းကို နေ့တိုင်းစီးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ခြေထောက်ချွေးထွက်ရသလဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာတွေမှာထက် ခြေထောက်မှာ...
အဝတ်အစားဆိုက်များစွာ လျှော့ဝတ်နိုင်တဲ့အထိ ဝိတ်ကျသွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနည်းလမ်းများ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မစ်ဆိုရီမှ ဟန်နာလက်စ်တာအမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူရဲ ့ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်အမင်း လျော့ကျသွားတဲ့အတွက် အဝတ်အစားအရွယ်အစား ၁၀ ဆိုက် (10 dress sizes)အထိ လျှော့ဝတ်ရပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းသူဘဝမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အဖြစ် အဆင်သင့်စာ...
ဗီတာမင်ဒီကို သဘာဝအတိုင်း ရရှိစေဖို့
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အရွယ်မရွေး၊ အထူးသဖြင့် အိမ်ထဲမှာပဲ နေလေ့ရှိကြတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလည်း မနက်ခင်းမှာ ခဏလောက် နေပူဆာထွက်လှုံသင့်ပါတယ်။ မနက်စောစော ၆ နာရီခွဲကနေ ၈ နာရီအတွင်းမှာ မိနစ် ၂၀ လောက် နေပူဆာလှုံပေးသင့်ပါတယ်။...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဗိုက်ပူနေလို့ စိတ်ညစ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အဆီတွေကိုရှောင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေကို စားပေးတာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က လျော့ကျခဲတဲ့ ဗိုက်အဆီတွေကို တကယ်ကျဆင်းစေပါတယ်။ (၁) ထောပတ်သီး ထောပတ်သီးမှာ တခြားအသီးတွေထက် နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အဆီများစွာပါဝင်ပြီး မကောင်းတဲ့...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လည်ကုပ်ညောင်းတာ (တစ်နည်းဇက်ကြောတက်တာ)ဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား ပုံစံမမှန်တာကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ လည်ကုပ်ညောင်းတာဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဒါမှမဟုတ် လည်ပင်းကြွက်သားဝေဒနာ ရခြင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လည်ကုပ်ညောင်းတာဟာ ဝေဒနာအသေးအဖွဲမှ အကြီးအမားအထိ ဖြစ်တတ်ပြီး လည်ကုပ်နာကျင်တာက ရုတ်တရက်နဲ့...
ရာသီဥတုမည်းမှောင်ချိန်မှာတောင် ထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်းကင်းပြီး ပျော်ရွှင်မှုတိုးစေမည့်နည်းများ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ရာသီဥတုမှောင်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းချိန်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတိုးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာရုံနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ စွမ်းအင်တွေ တိုးနေပါလိမ့်မယ်။ သာယာစွာနိုးထပါ နံနက်ခင်းတိုင်း မှောင်ရီသမ်းတဲ့အချိန်မှာ နိုးထတာက စိတ်လန်းဆန်းဖို့မလွယ်ပါဘူး။ နံနက်တိုင်း ညင်ညင်သာသာ နိုးထနိုင်ဖို့ ပင်လယ်ရေကျသံလို ငြိမ့်ညောင်းတဲ့...
ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကို ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ အဓိကကျွေးသင့်သလဲ . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေကို ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ ဦးစားပေးကျွေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ A. (၁) ကြက်ဥ ကြက်ဥတစ်လုံးမှာ အသားဓာတ် ၆ ဂရမ်ပါရှိပြီး ဗီတာမင်ဘီနဲ့ ဆီလီနီယမ်ဓာတ်အပြည့်အဝပါရှိတဲ့အပြင် ကင်ဆာဆေးသွင်းတာကြောင့်ရရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်...
နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စပြုလုပ်ခြင်းက စောစီးစွာသေဆုံးနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင်
———၊ ကိုထက် ၊——— ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်အများစုကတော့ အိမ်မှုကိစ္စတွေပြုလုပ်ရမှာကို အလွန်ပျင်းရိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ၅ မိနစ်ခန့် အိမ်မှုကိစ္စ ပြုလုပ်တာက အသက်အလယ်အလတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ သေဆုံးနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ သိပံ္ပပညာရှင်တွေက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံရှိ လေ့လာသူတွေက အိမ်တွင်းဖုန်စုပ်ခြင်း၊ ခြံထဲမြက်ရိတ်ခြင်းတွေ...